Ulateomie gam akporo na Windows ma ọ bụ Mac | Akụkọ akụrụngwa
Nke a nwere ike ịbụ nrọ nke ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị chọrọ ịnụ ụtọ, nke ọtụtụ Ngwa gam akporo na kọmputa gị, bụrụ onye a na Windows ma ọ bụ Mac sistemụ; N'agbanyeghị eziokwu ahụ dị ugbu a ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke amụma iji ulateomie sistemụ arụmọrụ anyị na kọmputa gam akporo, igwe ọrụ ndị a na-enwekarị mmachi, nke anaghị achịkwa iji dozie mkpa ọ bụla maka ụtọ ọ bụla.
Na mgbakwunye, igwe mebere na-e emomi ikpo okwu android n'ime kọmputa anyị, ha na-achọkarị nnukwu ego iji rụọ ọrụ; Ihe akaebe nke a bụ na anyị ga - ejide nnukwu RAM, ọtụtụ cores nke nhazi anyị, oghere diski n'etiti ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ. Ma Kedu maka ịtụgharị kọmputa nkeonwe gị na ngwaọrụ gam akporo ka ọ na-arụ ọrụ na oge?
1 Ngwa nke atọ maka PC na Mac iulateomi ihe gam akporo
2 Ọrụ kachasị mkpa na Android a
Ngwa nke atọ maka PC na Mac iulateomi ihe gam akporo
Ọfọn, ngwa dị mfe anyị nwere ike ibudata na oge a kpamkpam n'efu si n'aka saịtị bluestacks.com, ebe anyị ga-ahọrọ ngwá ọrụ gị iji wụnye ya na kọmputa anyị; N'ebe ahụ ị nwere nhọrọ 2, otu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (maka Windows) na isi awọ ọzọ (maka nyiwe Mac).
Ozugbo ebudatara ngwá ọrụ ahụ, anyị na-aga n'ihu ịwụnye ya, usoro nke ga-ewe oge ebe ọ bụ na ngwa ahụ chọrọ ihe ole na ole iji budata ma tinye ya na igwe ojii gị.
Usoro ahụ nwere ike iwe obere oge, chọrọ nnukwu ndidi ruo mgbe ọrụ ya ọ bụla na usoro nrụnye mechara.
Ngwa a ga - enye anyị ohere ịmepụta ụzọ nnweta, nweta ụlọ ahịa ngwa n'etiti ndị ọzọ ọzọ.
Mgbe arụnyere n'ụzọ zuru ezu, ozugbo ga-agba ọsọ "ihuenyo zuru" n'ime otu anyị, ebe anyị ga-enwe mmasị na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa iji nwee ọ enjoyụ na n'etiti ha, egwuregwu vidio, nke bụ ọkacha mmasị nke obere na onye anyị nwere ike inye kọmputa ma ọ bụrụ na anyị ga-arụ ọrụ na mbadamba anyị android.
Ọrụ kachasị mkpa na nke a android ilatedomi
Este android iulatedomi (nke ahụ bụ ihe anyị chọrọ ịkpọ ya) bụ ụdị pụrụ iche nke BlueStacks, ndị na-enye mmelite oge niile na sistemụ arụmọrụ ha; N'elu ihuenyo anyị ga-enwe mmasị na edemede ole na ole, ha niile n'ụdị ụlọ ahịa ngwa.
N'elu bụ ngwaọrụ kachasị eji eme ihe bụ ndị anyị mere na nso nso a; enwere ugbua nke na-ezo aka na nhazi usoro, nke anyị nwere ike ime iji nyochaa ọnụọgụ ole na ole ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe ha.
The interface na-enye anyị nhazi a na android ulatedomi, bụ yiri nnọọ ihe anyị ga-ahụ na ngwaọrụ mkpanaka nwere sistemụ arụmọrụ aYa mere, ọ dị mfe ijikwa nke ọ bụla n’ime ihe ndị a ma ọ bụrụ na anyị nwere ahụmịhe na ngwaọrụ mkpanaka anyị.
Bọtị dị ka Home, weghachite ihe ma ọ bụ nyocha nke ngwa mepere emepe gosipụtara site na akara ngosi ha dị na ala aka ekpe.
N'ebe aka nri kama, anyị ga-enwe ozi dịka oge, ohere nke ịkekọrịta ụdị foto ma ọ bụ ngwa, obere akara ngosi gbanwee site na ihuenyo zuru oke na windo dị iche na akara ngosi ọzọ ga - enyere anyị aka imechi ngwa ahụ.
Akara ngosi ikpeazụ a anyị kwuru okwu ya, ga-emechi ngwa ọrụ nwa oge, ọ bụ ezie otu a ga-egbu ya site na iji obere akụrụngwa na ndabere, ihe anyị nwere ike ịghọta ma ọ bụrụ na anyị enyocha mpaghara ngosi n'ime ọdụ ọrụ anyị, site na ebe anyị nwere ike ịhọrọ ya ọzọ ka ọ gbaa ọsọ wee laghachi ọrụ android n'ime Windows ma ọ bụ Mac.
Dịka anyị nwere ike ịmasị, nke a bụ ụzọ ọzọ dị mma iji jiri ngwa ndị a android na kọmputa nkeonwe, ihe n thatomi nke na-ekwe nkwa ịdị irè karị ka ọ na-amalite, ebe ọ bụ na ndegharị ugbu a ka nọ n'ọkwa beta dị ka akụkọ sitere n'aka saịtị ya si kọọ. Ọ bụrụ na ị nwere egwuregwu na-adịghị awụnyere na kọmputa gị, jide n'aka na ị nwalee ndakọrịta ya na aro anyị.
Ozi ndị ọzọ - Egwuregwu a ga-arụ ọrụ na kọmputa m
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Tọghaa kọmputa nkeonwe gị na ngwaọrụ gam akporo
Nkuzi: Etu ị ga-esi nweta ego ọzọ na foto ekeresimesi